Muxuu Daarran-yahay Shirka Guddiga Guud Ee Beelaha Habar-Jeclo Ay Ku Dhawaaqday
Friday September 14, 2018 - 09:34:35 in Wararka by saleban Cilmi
Muxuu Daarran-yahay Shirka Guddiga Guud Ee Beelaha Habar-Jeclo Ay Ku Dhawaaqday Gudida Guud ee Beelaha Habar-Jeclo ayaa ku dhawaaqay inay dabayaaqada Sanadkan ay ku qabanayaan meel ka midda Gobolka Togdheer shir-dhaqameed
Burco (Caynabanews) 13.09.2018 Gudida Guud ee Beelaha Habar-Jeclo ayaa ku dhawaaqay inay dabayaaqada Sanadkan ay ku qabanayaan meel ka midda Gobolka Togdheer shir-dhaqameed u dhexeeya Beelahoodda. sida ay shaaca kaga qaadeen Gudida Guud ee Beelaha Habar-Jeclo. Shirkayagu maaha ayey yidhaahdeen mid siyaasadeed ee waa mid Horumarineed iyo dhaqan, kaasi oo Beelaha Habarjeclo Ay danahooda kaga hadli doonto oo go’aamo-na ay ka soo saari doonto, kaasi oo aanay ka qayb-geli doonin Siyaasiyiinta Madax-banaan iyo masuuliyiinta xilalka dowladda haysaaba.
Iyaddoo sida ay sheegeen gudida Guud ee Beelahaasi. Ay ugu talo-galeen mudadaasi inay kaga soo qayb-galaan oo keliya Qol-qoljooga iyo Qurba-jooga Beelaha HJ oo dhamaan lagu casuumay. isla-markaana Ay iyaguna "Gogosha u fidinayaan dadka hormuudka u ah Beelaha Habar-Jeclo oo dhan.” Waxaana sidaasi ku dhawaaqay gudida guud ee Beelaha Habar-Jeclo oo Magaalada Madaxda Gobolka Togdheer ee Burco ku qabtay shir Jaraa’id todaabadkan horaantiisii . Shirkan Ayey sheegeen inaanu ahayn mid siyaasadeed ama aanay cidina ka dambayn.
Sidoo kale shirka guud ee Beelahani ay qabsanayaan gebi ahaanba way ka ilaalinayaan. sida ay sheegeen gudida guud "Xubnaha damaca siyaasadeed hayo ee Beelaha ka soo jeeda iyo kuwa xukuumada Muuse Biixi taabacsan ee doonaaya inay wakiil uga noqdaan" labadaba. isla-markaana cidii hunguri ku jirey , inay candhuuftooda dib u liqaan . waxaanu u sheegaynaa oo kale , inay cidkasta. siiba xukuumadda Muuse Biixi aanay shirkani kaga bixin waqti badan iyo awood badan oo ay ugu talo-gasho inaanay shirkani qabsoomin. sidii loogu talo-galay, iyada oo ka baqaysa in shirka ay ka soo baxaan go,aano siyaasadeed.
Sida ay sheegeen Gudida Guud ee Beelaha: Waxaa shirkan ka dhalan kara fikir guud oo Beelaha shirkani qabsanaaya Ay dantooda horumarineed oo keliya ku midoobaan. si loo gaadho ujeedo midaysan oo beeshu yeelato . Sida Midnimo Buuxda iyo Qorshe midaysan oo aan Cidna caqabad ku ahayn.
Hadaba waxaa la ogaysiinayaa dhamaan Beelaha habarjeclo iney si mug iyo miisaan leh uga soo qayb-galaan wakhtigana ilaaliyaan. madaama ay gudida guud ee beeluhu ay isla garteen in shirkan la qabto, waxaanay qaybaha kala duwan ee Beelahana ugu baaqeen inay ka Qaybgalaan.